Ngophuhliso lwamaxesha, Ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zokukhuseleka, ukonga umbane ngakumbi, ukunciphisa ingxolo, nokunciphisa ukukhutshwa okungcolisayo, kwinkqubo yonyango yomphezulu, Ipeyinti yokutsala iye yaba yindlela entsha kukhuseleko lokusingqongileyo..Ngokungafaniyo nokuchopha okuqhelekileyo, i-vacuum electroplating inokusingqongileyo ngakumbi. Ngaxeshanye, i-vacuum electroplating inokuvelisa umphumo omnyama nge-gloss elungileyo engenakufezekiswa yi-electroplating yesiqhelo..
Ukucoca i-vacuum electroplating sisiseko sokubonisa ngokomzimba, apho iargon igesi itofwe khona phantsi kwento, kunye negesi yeargon ibetha izinto ekujoliswe kuzo, kwaye iimolekyuli ezahluliweyo zezinto ekujoliswe kuzo zenziwe iintengiso yimpahla eqhubayo ukwenza umaleko ofanayo kunye nomphezulu ogudileyo womhlaba..Kule nkqubo yokuphamba, izinto ekujoliswe kuzo zibaluleke kakhulu, ke zithini usetyenziso lwezinto ekujoliswe kuzo kwinkqubo yokuchongwa kwe-vacuum??Namhlanje, umhleli uya kukunika intshayelelo eneenkcukacha.
Kwiimeko eziqhelekileyo, Ukusetyenziswa kwezinto ekujoliswe kuzo kwi-vacuum electroplating inezi zinto zilandelayo:
(1) Izinyithi, iialloys okanye ii-insulators zingenziwa kwizinto zefilimu ezincinci.
(2) Phantsi kwemiqathango efanelekileyo yokuseta, Ifilimu ebhityileyo yokwenziwa okufanayo inokwenziwa kwiithagethi ezininzi nezintsonkothileyo.
(3) Ngokongeza ioksijini okanye ezinye iigesi ezisebenzayo kwindawo yokukhupha, umxube okanye umxube wezinto ekujoliswe kuzo kunye neemolekyuli zegesi zinokwenziwa.
(4) Igalelo ekujoliswe kulo ngoku kunye nexesha lokuchamela kunokulawulwa, kwaye kulula ukufumana ubukhulu befilimu ephezulu kakhulu.
(5) Xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo, ilungele ngakumbi ukuveliswa kweefilimu ezinkulu ezifanayo.
(6) Amasuntswana okutshiza phantse awachaphazeleka ngumxhuzulane, kunye nezikhundla ekujoliswe kuzo kunye ne-substrate zinokucwangciswa ngokukhululekileyo.
(7) Amandla okubambelela phakathi kwe-substrate kunye nefilimu ingaphezulu kwe- 10 amaxesha efilimu yokuhambisa umphunga ngokubanzi, kwaye ngenxa yokuba amasuntswana atyhidiweyo aphatha amandla aphezulu, ziya kuqhubeka nokusasazeka kumgangatho wokwenza ifilimu ukufumana ifilimu enzima kwaye eshinyeneyo. Ngaxeshanye, Amandla aphezulu enza ukuba i-substrate ifune kuphela ifilimu yeCrystallized inokufumaneka kubushushu obusezantsi.
(8) Ukuxinana okuphezulu kwe-nucleation kwinqanaba lokuqala lokwakheka kwefilimu, enokuvelisa ifilimu e-ultra-thin eqhubekayo engaphantsi kwe-10nm.
(9) Izinto ekujoliswe kuzo zinobomi obude kwaye zinokuzenzekelayo kwaye ngokuqhubekayo ziveliswe ixesha elide.
(10) Izinto ekujoliswe kuzo zingenziwa ngeendlela ezahlukeneyo, Uyilo olukhethekileyo lomatshini lolawulo olungcono kunye nokusebenza ngokufanelekileyo.
Oku kungasentla sisishwankathelo somhleli wakhe wonke umntu. Ezinye zeempawu zokusetyenziswa kwezixhobo ekujoliswe kuzo kwi-electroplating vacuum. Njengemveliso yetekhnoloji entsha, ukubonakala kwezinto ekujoliswe kuzo yinkqubela phambili enkulu kwitekhnoloji yonyango yomphezulu..
Ngaphambili: Izinto eziluncedo zezinto ekujoliswe kuzo ezikumgangatho ophezulu wokujikeleza kwemiphunga kunye neeplanethi
Okulandelayo: Ukuphuhliswa kwesinyibilikisi se-aluminium ephezulu ekujoliswe kuyo